Big City Small World (Series3Episode 10 - Family Matters) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on October 10, 2013 at 11:03 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်ဘာသာအားစတင်လေ့လာနေသော Myanmar Network အသင်းဝင်များ အဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန် ဤနေရာတွင် စကားပြောများကို မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းသင်ခန်းစာ စာသား၊ mp3 အသံဖိုင် နှင့် ဆက်စပ်လေ့လာနိုင်သော လေ့ကျင့်ခန်းများကို http://learnenglish.britishcouncil.org/en/big-city-small-world တွင် သွားရောက်လေ့လာနိုင် ပါသည်။
Series3Episode 10 - Family Matters (အတွဲ (၃) အပိုင်း (၁၀) - မိသားစုကအရေးကြီးတယ်)
Harry wants to meet Bindyu's parents but she fears that her family won't like him. Why?
ဟယ်ရီဟာ ဘင်ယုရဲ့မိဘတွေနဲ့တွေ့ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကောင်မလေးကသူ့မိသားစု ဟယ်ရီ့ကို သဘောမတွေ့မှာ စိုးရိမ်နေတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလိမ့်။
Series3Episode 10 - Family Matters ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
Olivia: Hey, Harry! How’s it going?
Harry: Not bad, thanks.
Olivia: Are youamillionaire yet?
Harry: Eh? What? Oh ... Fadi’s “FindLondon” business. Actually it’s going pretty well – we’ve set upawebsite and now we’re taking lots of enquiries, there’salot of interest. But I’m only an investor, you know. It’s not my real job.
အာ . . . ဘာ? အိုး . . . ဖာဒီရဲ့ "FindLondon" လုပ်ငန်း။ တကယ်တော့ အဲဒါအခြေအနေကောင်းပါတယ်။ ငါတို့ဝဘ်ဆိုက်ထောင်ပြီးပြီ။ အခုငါတို့ စုံစမ်းတာတွေအများကြီးဖြေပေးနေရတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူတွေများတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသက်သက်လေ။ သိတယ်မဟုတ်လား။ ငါ့ရဲ့ တကယ့်အလုပ်မဟုတ်သေးဘူး။
Olivia: Sounds even better – if you can make money without working!
ပိုတောင်ကြားကောင်းသေး။ အလုပ်မလုပ်ဘဲ ငွေရှာနိုင်တယ်ဆိုရင်။
Harry: Yeah! I guess that’s the plan. That’s Fadi’s plan anyhow! But, as your friend Magda says, there’s more to life than money.
အေး။ ငါလည်းဒီလိုဖြစ်မယ်ထင်တာပဲ။ ဒါဖာဒီရဲ့အကြံပဲ။ ဒါပေမယ့် နင့်သူငယ်ချင်း မဂ်ဒါကပြောတော့ ဘ၀ဟာငွေသက်သက်အတွက်မဟုတ်ဘူးတဲ့။
Olivia: Well, that’s certainly true.
Harry: I mean, I want to spend more time with Bindyu – that’s what makes me really happy ...
ငါဆိုလိုတာက ငါဘင်ယုနဲ့ ပိုပြီးအချိန်ပေးချင်ပါတယ်။ အဲဒါကငါ့ကိုတကယ်ပျော်ရွှင်မှုပေးတာ . . .
Olivia: Why don’t you just go out more together?
နင်တို့ဒီထက်ပို အတူတူ သွားကြလာကြပါလား။
Harry: Well, we see each other most days ... but it’s not that ...
အင်း ငါတို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တွေ့ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါမဟုတ် ...
Olivia: What is it then?
Harry: I’d like to take our relationshipabit more seriously.
Harry: But she doesn’t want me to meet her parents.
Olivia: Oh, I see. Why not?
Harry: That’s just it. I don’t know really. I think she’s embarrassed by me, or ashamed of me ... or something ...
အဲဒါပဲ။ ငါလည်းအတိအကျမသိဘူး။ ငါထင်တာက သူရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်နေတာလား။ ငါ့ကြောင့်အရှက်ရနေတာလား တစ်ခုခုပဲ။
Olivia: No! That can’t be true! Why do you think that?
Harry: I don’t know. Perhaps I’m not rich enough, or successful enough. You know, I’m just an ordinary London guy. Anyhow, I must be off now – if you see Bindyu, let her know I was looking for her!
ငါလည်းမသိဘူး။ ငါကမချမ်းသာလို့ဖြစ်မှာပေါ့။ မအောင်မြင်လို့ဖြစ်မှာပေါ့။ သိတယ်မဟုတ်လား။ ငါကသာမန်လန်ဒန်မြို့သားကလေးလေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါသွားတော့မယ်။ နင်ဘင်ယုနဲ့တွေ့ရင် ငါသူ့ကိုရှာနေတယ်လို့ပြောပေးပါဦး။
Bindyu: Hey there!
Olivia: Hello! Oh, Harry was just in here looking for you.
ဟယ်လို။ အိုး ဟယ်ရီအခုလေးတင်နင့်ကိုရှာနေသေးတာ။
Bindyu: I knew it! I meant to catch him – but just missed him!
ငါသိတယ်။ သူ့ကိုငါတွေ့ဖို့လာတာ။ ဒါပေမယ့်လွဲသွားတယ်။
Olivia: He was talking about you, actually.
Bindyu: Oh yeah? All good things I hope.
Olivia: Yes, but ...
Bindyu: But? You mean there’sa“but”?
ဒါပေမယ့် ? “ဒါပေမယ့်” ရှိသေးတယ်လို့ပြောချင်တာလား။
Olivia: Yeah. He thinks you’re not taking the relationship as seriously as he wants.
အေး။ နင်က နင်တို့ဆက်ဆံရေးကို သူ့လောက်အလေးအနက်မထားဘူးလို့ ထင်နေတယ်။
Bindyu: Oh no! That’s not true ... Why does he think that?
အိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါမဟုတ်ဘူး။ သူဘာဖြစ်လို့ဒီလိုထင်ရတာလဲ။
Olivia: He thinks you don’t want him to meet your family.
Bindyu: Oh, I see. It’s not that I don’t want him to meet my parents, it’s just that it’s ...
သြော်သိပြီ။ ငါကသူ့ကိုမိဘတွေနဲ့ပေးမတွေ့ချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါဒီလိုပါ . . .
ဘာ . . .
Bindyu: It’s just difficult, that’s all.
Bindyu: Well ... you know ... We’re so different ... from different backgrounds ... and my family are very traditional.
အဲ နင်သိတဲ့အတိုင်းပဲ တို့တွေဟာ အရမ်းကွာခြားတယ်။ မတူညီတဲ့ နောက်ခံအကြောင်းတွေနဲ့ . . . ပြီးတော့ ငါတို့မိသားစုက အရမ်း ရှေးရိုးဆန်တယ်။
Olivia: I see ... Still, perhaps you should try.
Bindyu: Yeah – maybe you’re right. I’ll try.
အေး နင်ပြောတာဟုတ်တယ်။ ငါကြိုးစားကြည့်ဦးမယ်။
Permalink Reply by khin on October 11, 2013 at 12:24